Maxaa ka soo kordhay wararka Wijnaldum la xiriirinaya inuu ka tagayo Liverpool? – Gool FM
Dajiye April 5, 2021
(Liverpool) 05 Abriil 2021. Warbaahinta Ingariiska ayaa werisay fiidnimadan caawa ee Isniinta ah in maamulka Liverpool ay si cad u badaleen go’aankoodii hore ee ku aadanaa heshiis kordhinta xiddiga reer Holland ee Georginio Wijnaldum.
Warbaahinta Ingariiska ayaa shaaca ka qaaday wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan mustaqbalka xiddiga khadka dhexe reer Holland iyo kooxda Liverpool ee Georginio Wijnaldum.
Wargeyska “The Times” ayaa soo wariyay in Liverpool, oo uu hoggaaminayo Jürgen Klopp, ay wali aaminsan tahay suurtagalnimada ay ku sii heysan karaan adeega xiddigooda khadka dhexe ee Georginio Wijnaldum.
Inkastoo ay jiraan warar sheegaya inuu si cad u go’aansaday inuu ka tago Reds xagaagan, si uu u saxiixo heshiiska uu ugu biirayo kooxda Barcelona laga bilaabo xilli ciyaareedka cusub.
Wargeyska “The Athletic” ee dalka England ayaa horay u shaaciyay in ciyaaryahanka reer Holland ee Wijnaldum uu diiday inuu qandaraaska u cusbooneysiiyo Liverpool sababo la xiriira dalab dhaqaale liita oo kaga yimid kooxda heysata horyaalka Premier League.
Wijnaldum ayaa xilli ciyaareedkiisa soo socda ka ciyaari doona Liverpool, halkaasoo qandaraaska ciyaaryahanka uu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedka cusub ee 2020/2021 mana jiro heshiis cusub ay wada gaareen labada dhinac si loo cusbooneysiiyo qandaraas laacibka.
RASMI: Safka Real Madrid ee ka qayb galaya ciyaarta Liverpool oo la soo saaray & Hazard oo...
Jorge Valdano oo kula taliyay Real Madrid inay ogolaato dalabka kooxda Paris Saint-Germain